Ingabe izingxoxo ze-Skype archive? - I-Skype
Main > I-Skype > Imiyalezo ebambezelekile ye-Skype - uyixazulula kanjani
Imiyalezo ebambezelekile ye-Skype - uyixazulula kanjani
Ingabe izingxoxo ze-Skype archive?
IMicrosoft izolo ikhiphe okushaI-Skypeyakha i-v8. 29.76. ... Lokhu kwakha kuletha amandla weizingxoxo zomlandophakathiI-Skype. Noma ungaizingxoxo zomlando, ngeke ukwazi ukubona yonke ifayili lakho le-izingxoxo ezigciniwengasikhathi sinye.
discord ngeke ikhiphe
Hheyi bafana, lesi yisigaxa esisha esishisayo futhi ngizonikhombisa nina bafana ukuthi ningagenca kanjani umlando wengxoxo yakho ye-skype ngabe ngabe usenziwe manje, kepha ngokusobala hhayi yebo, wonke umuntu ubengazami kanzima ngakho-ke nginalezi zintathu imizuzu ngayo ngichaze ukukuthola kahle futhi ngikwenzile kahle ngakho-ke ngizokukhombisa bafana ukuthi ungawushintsha kanjani umlando wakho wengxoxo ye-skype ngakho into yokuqala ofuna ukuyenza ukufuna ukuthola amafayela wakho womlando wengxoxo ukuze ufune umhloli avuleke, thayipha% idatha yohlelo lokusebenza bese ucindezela u-ENTER futhi kufanele kukuyise kudatha yakho yohlelo lokusebenza bese uzula okufunayo lapho uya ku-skype bese uchofoza kufolda yakho yomsebenzisi we-skype ngegama lakho lomsebenzisi le-skype Faka igama lefayela eliqukethe yonke i-skype yakho umlando wengxoxo yifayela elikhulu le-db ukuze ulicabange njenge-database, i-db imele i-f noma i-database kanye ne-dat Uhlelo lwebhange abalusebenzisayo yi-SQL Lite ngakho-ke ngilande isihleli noma isiphequluli se-SQL Lite njengoba ubona le yi-SQL Lite Data Browser 2.0 b1. Ufuna ukuvula lelo gama lefayela i-Point DB manje usunokufinyelela kulo lonke ulwazi olugciniwe lwama-akhawunti akho e-Skype ngokulandelayo ufuna ukupheqa phansi lapha bese ukhetha itafula lemiyalezo futhi kulungile lapho uya khona ngoba benginakho okuningi, uh, kakhulu umlando njengo Ungabona kunemiyalezo eyizinkulungwane ezingama-41 engiyithumele futhi ngayithola ku-Skype njalonjalo futhi yebo, lokho selokhu ngafaka iWindows 8, ngakho-ke ngokulandelayo uzofuna ukuya kumlando wakho.
Umlando wakho wengxoxo ongathanda ukuwuguqula futhi kunezindlela eziningi ongasesha ngazo, kepha kulokhu ngizokwenza nje ngokuthola umyalezo wakamuva ovela kulowo muntu futhi ofuna ukukwenza ukuthi ufuna thatha igama labo lomsebenzisi, ngakho-ke liphuma ngokushesha kuleli cala, ngakho-ke shaya leyo nkinobho yokucinga encane ecocekile noma ungakwenza lokho nge-SQL bese uyahamba uyofuna umbhali naku-SQL ukhethe inkanyezi noma yini oyaziyo. Ukuqhubekela phambili ngizobeka iSkittle e Dot Pops Clicksearch futhi kuzonginikeza amarekhodi amaningi ofuna ukuwenza ufuna ukuskrolela phansi ezansi ngoba lawa marekhodi ngandlela thile ngokulandelana kwezikhathi, kufakwe kalula ekugcineni ngakho mane uchofoze kulokho bese ufika lapho bese ingxenye ofuna ukuyihlela ngumzimba weXML ngakho-ke umlayezo wokugcina ulapha d futhi ulapha ngakho-ke sikuthola kuwo bhala noma yini oyifunayo njengami I-love cp woza fbi woza ungibambe ama-js bese uzobona nje ukuthi uyibuyisele emuva wenze izinguquko bese ufuna ukuvala u-skype hhayi nje ukuvala iwindi kepha ukuphuma ngale ndlela kuzokuphoqa ukuthi u-skype ulayishe kabusha impikiswano, i- i-database futhi ofuna ukukwenza ukugcina i-database bese uvule kabusha i-skype blah bese sifika endabeni yethu sihambe nakho konke okungazelelwe lokho futhi ungasebenzisa imilayezo ehlukile yokusesha njengokuya emzimbeni we-xml bese ufuna noma yini ethunyelwe kumshwana noma yini, noma ungavele ufune i-matche s njalonjalo futhi uma ufuna ukuzijabulisa ungakwazi nokunamathisela kwenye i-HTML. Nginesiqiniseko sokuthi ungabeka i-HTML njengesibindi angiqiniseki ngezinguquko ezinesibindi sizokuvala lokhu ngokushesha nginesiqiniseko sokuthi yamukela i-HTML ngoba ungathumela i-HTML kuzinguqulo ezindala, kepha ngiqinisekile ungaqiniseki ngo-100% ukuthi basigcina kanjani isitolo sedatha yeah ukuze ukwazi ukubeka izithombe lapho noma yini.
Angicabangi ukuthi uSkype uthatha izithombe kepha ungenza ukufometha okuyisisekelo uma ufuna ngempela ukwenza kanjalo nontanga omusha oshisayo futhi ungavakashela ibhulogi yami ku-noobcalm eshisayo bese sizokubona kamuva
Ngingayithola kanjani ukulandelela imiyalezo Skype?
Iya kufayela le-I-Skypexoxa ofuna ukusesha. ngaphansi kwesihloko sengxoxo. Ungafinyelela futhi isici sokuthola kusuka kufayela le-umyalezobox usebenzisa inhlanganisela yokhiye Ctrl + F kwideskithophu yeWindows noma Command + F ku-Mac.
Nawa ama-Skype ayi-10 amahle kakhulu weBhizinisi namasu. Siyakwamukela ku-Sele Training. NginguJason Sele.
I-Skype yeBhizinisi iyithuluzi elihle elingadideki ne-Skype Personal Edition. I-Business Edition yenzelwe indawo yezinkampani futhi inezici eziningi ezibanzi. Nawa amanye amathiphu namasu okwenza i-Skype yeBhizinisi ikusebenzele.
Inombolo1 - Dala imihlangano ye-Skype ku-Outlook. I-Skype yeBhizinisi ixhunyaniswe ngqo ne-Outlook. Ukuphela kokufanele ukwenze chofoza umhlangano omusha we-Skype uma usekhalendeni lakho.
I-Skype isetha ngokuzenzakalela izinombolo zakho zokudayela kanye nesixhumanisi somhlangano wakho we-Skype. Vele ufake oxhumana nabo ku-To:, faka isihloko sakho bese ushaya ku-Send.Nombolo 2 - Rekhoda Umhlangano ngo-1080p HD.
Lapho usuqale umhlangano we-Skype, ungavele uchofoze ichashazi lamachashazi ekhoneni elingezansi kwesokudla bese uqala ukurekhoda. Lokhu kuzoqopha umhlangano wakho ngo-720p. Uma ungathanda ukusetha ukulungiswa okuphezulu kuzilungiselelo zakho ze-Skype, chofoza Qopha bese uhlola lokhu kulungiselelwa kwe-HD Full HD.
izinsiza ze-microsoft bill.ms.net
Inombolo 3 - Hlukanisa ifayela le-PowerPoint. Indlela enhle yokwabelana ngefayela elikhulu le-PowerPoint ku-Skype yeBhizinisi ukulilayisha efwini. Chofoza Abelana Ngokuqukethwe.
Khetha okuthi Yabelana ngamafayela e-PowerPoint. Khetha ifayela lakho le-PowerPoint futhi lizolilayisha efwini. Manje lo mbhalo ungabukwa abanye ngaphandle kokulinda ukuthi amafayela akho afakwe.
Lapho usuyilayishile, chofoza inkinobho yokwabelana ngokuqukethwe futhi bese uya ku-ManageContent bese ulawula izilungiselelo zefayela. Susa, vimba, yenza kutholakale kuphela kubantu abathile nakwezinye izilungiselelo eziningi. Inombolo 4 - Ukuvuselelwa okuzenzakalelayo kolwazi lobukhona bekhalenda.
Kuzilungiselelo ze-Skype for Business ngaphansi kwe-Personal, activate this markmark for 'Update my presence based on my calendar information'. Lokhu kuzobuyekeza oxhumana nabo futhi kukwazise uma usemhlanganweni. Ungakhetha futhi ibhokisi lokuhlola ukuze wabelane ngalolu lwazi noxhumana nabo abazimele noma abasesidlangalaleni.
Inombolo 5 - Setha ungaphazamisi emhlanganweni. Futhi ngaphansi kwezilungiselelo ze-Skype for Business. Uma ushintshela esimeni, kunenketho lapha ongikhombisa yona njengoba ungaphazamisi.
Uma ngabelana ngedeskithophu yami, sebenzisa lokhu ukwazisa abantu ukuthi usemhlanganweni futhi awufuni ukuthola izingcingo noma imiyalezo esheshayo. Inombolo 6 - vumela ukuxhumana kwangaphandle. Esikhungweni sakho sokuphatha se-Office 365, chofoza i-Skype for Business.
Ngaphansi kwenhlangano, chofoza Ukuxhumana Kwangaphandle. Uma ukhetha leli bhokisi lokuhlola, abasebenzisi bazokwazi ukusebenzisa i-Skype yeBhizinisi ukuxhumana nabasebenzisi be-Skype abangaphandle kwenhlangano yakho. Lokhu kukuvumela ukuthi uthole futhi uthumele imilayezo esheshayo ye-Skype kubantu abangaphandle kwenethiwekhi yakho yangaphakathi.
umsingathi wokudlulisa ngemuva
Ngokuzenzakalelayo, lokhu kunikwe amandla ngaphandle kwezizinda ezivinjiwe futhi lapha ngezansi ungangeza noma yiziphi izizinda ofuna ukuzivimba ekuxhumaneni. Inombolo 7 - ukwenza ngokwezifiso izimemo zomhlangano. Endaweni efanayo yesikhungo sokuphatha seSkype kunethebhu yemihlangano eku-inthanethi.
Yilapho ungenza khona ushintsho kuzimemo zakho zemihlangano. Ungakha i-logo, ungangeza i-url kufayela losizo, ungafaka futhi i-url esemthethweni bese udala umbhalo we-footer ozovela ekugcineni komhlangano wakho we-Skype. Lolu lwazi luzovela phakathi kwale migqa emibili edeshiwe kumemo yakho yomhlangano.
Inombolo 8 - hlola ideshibhodi yekhwalithi yekholi yakho. Esinye isici esiwusizo esikhungweni sokuphatha se-Skype yideshibhodi yekhwalithi yekholi. Ungayithola ngokuya ku-Amathuluzi, ngokuchofoza ku-Skype ye-Business Online Call Quality Dashboard.
Ideshibhodi yekhwalithi yezingcingo iyasiza kuphela uma uhlanganise ukusebenza kwefoni ye-Skype kwimvelo yakho ye-Skype yeBhizinisi. Ibonisa amagrafu womsebenzi wezingcingo zakho nokuthi ingabe ikhwalithi yinhle, yimbi noma ayihlanganisiwe. Ikubonisa izitayela zanyanga zonke nezansuku zonke futhi ikunikeza umbono omuhle wokuthi zingaki izingcingo ezenziwa kunethiwekhi yakho nokuthi ikhwalithi yanele yini.
Uma ubona indawo enkulu enokuxhumana okungekuhle, kuyinkomba yokuthi kukhona okungahambi kahle ngenethiwekhi yakho noma okuthile bekuthinta ukuxhumana kwakho kwe-inthanethi. Inombolo 9 - Faka izinombolo zomakhalekhukhwini nezasekhaya. Kuzilungiselelo ze-Skype ezingaphansi kwamafoni kunezinombolo zefoni ongazifaka.
Isikhathi esiningi, lolu lwazi lutholakala ku-Office 365 noma ku-Exchange, kepha uma lungekho, ungalinamathisela ngaphakathi kuwe. Faka inombolo yakho yocingo, ikhaya, noma enye inombolo yocingo bese uyenza itholakale kwabanye abantu ekhadini lokuxhumana elibonisa imininingwane yakho yokuxhumana. Futhi ekugcineni inombolo 10 - izinketho zomhlangano.
Uma ufuna umhlangano osebenzayo we-Skype, chofoza izinketho zomhlangano ukuze ufake ikhalenda lakho. Ngaphansi kwezimvume ungakhetha ukuthi ngubani ofuna ukumlinda endaweni yokwamukela izivakashi. Uma ubeka u-'Yimi nje, umgqugquzeli womhlangano ', bonke abanye abantu bazokulinda endaweni yokwamukela izivakashi ukuze uqale umhlangano wakho.
Ukushiya 'wonke umuntu' kusho ukuthi noma ngubani angaxhuma emhlanganweni ngaphandle kokulinda endaweni yokwamukela izivakashi. Ungakhetha futhi ukuthi ngubani ozomethula. Uma kunguwe wedwa umuntu onikeza isethulo, kufanele usethe u- 'Just me' ukuze abanye abantu bangabhali ngaphezulu umhlangano wakho ngokwethula ideskithophu yabo ngaphezu kwakho futhi uzimisele ukuhamba phakathi kwezikrini zabantu abehlukene abafuna ukuzishintsha.
Ungakhumbula futhi lezi zilungiselelo ukuze umhlangano olandelayo owudalayo ube nezilungiselelo ezifanayo. Lokho kuphetha i-Skype ephezulu ye-10 yamathiphu namasu weBhizinisi. Ngiyethemba uthola lolu lwazi lusizo.
Sawubona, uma ufuna ukubona izindatshana eziningi ezinjengalezi sicela ubhalise futhi uma ngabe uyithandile le ndatshana shaya izithupha bese ushiya amazwana. Ngiyakwazisa kakhulu ukuxhaswa kwakho!
Ingabe i-Skype inemiyalezo esheshayo?
Ngaphezu kwamakholi wevidiyo namakholi ezwi,I-Skype iyi-anuhlelo lokusebenza lwesithunywa esheshayolokho kukuvumelaumyalezonoma ubani emhlabeni ngesikhathi sangempela.
Njengoba ulungisa izidingo zempilo yakho ematasa, wake wacabanga yini ukuthi bekumele kube nendlela engcono, kahle-ke ngize lapha, ngathola amalulwane bese ngifuna ukwenza impilo eningi lapha, eyodwa ngasikhathi, hheyi ukubheja hawu ngakho ngifona nje ukuthola ukuthi ngabe uthole umuntu? kuSkype nge-vortex esiyidubulayo Cha angikatholi muntu okwamanje Kulungile, uGillian ungenile, ake ngimbhalele umyalezo engingacabangi ukuthi ngubani onethezekile phambi kwekhamera, ofuna kwenze oh bheka ungangikhathazi ngoba ngiyakuzonda ukuba phambi kwekhamera futhi sidinga ngempela ukuthola umuntu onjengaye - kulungile ungakhathazeki bafana sizothola okuthile okulungile nisale kahle noma i-webcam inezinketho eziningi ezahlukahlukene ze-athikili izingxoxo bonke abahlinzeki be-imeyili abaphezulu kanye namanethiwekhi okuxhumana nomphakathi ahlinzeka ngohlobo kodwa ngemuva kokubheka kuzo zonke izinketho sinqume ukuthi le yindlela elula futhi enamakhanda kakhulu yokwenza ku-Skype. Uma wena nomuntu ofuna ukuxoxa naye usebenzisa abahlinzeki be-imeyili abahlukile, isoftware ye-athikili ngeke isebenze ndawonye, ​​kepha uma nobabili nifaka i-Skype. Lapho inkinga isixazululiwe, ungasebenzisa uhlelo lokusebenza ukuxoxa noma ukukhuluma ubuso nobuso. oh kanti vele sekunabantu abangaba yizigidi ezingama-400 ku-skype ngakho-ke amathuba okuthi abanye babangani bakho bazobe bekhona ukuze baqale ku-skype bekungeke kube lula ukulanda uhlelo lokusebenza kukhompyutha yakho! Khetha igama lomsebenzisi futhi ulungele ukuhamba, bese uqala ukwengeza oxhumana nabo - ungamema ngisho nabangane abangazange babe ama-Skype Mistakes uma badinga ukuncenga okuncane.
Babuze ukuthi bakulungele kanjani ukushaya izingcingo imiyalezo esheshayo nengxoxo ye-athikili ngentengo ephansi yamahhala. Ukuze uxoxe, mane uchofoze umngani, ucindezele inkinobho epholile, bese uvula ikhamera lapho ethatha ngaphandle kwalapho ungazizwa ulungele ngqo ikhamera. Uma kunjalo, ungahle ufune ukweqa isici se-athikili ndawonye, ​​ngakho-ke izingcingo ze-Skype-to-Skype nezingxoxo ze-one-on-free kumahhala, kepha ezinye izici ezimangalisayo ze-Skype zinikezwa ngezinhlelo zamanani ezahlukahlukene ezisukela kokungunaphakade ekubhaliseni kwanyanga zonke uyisebenzisela ukushayela noma iyiphi iselula noma inombolo yasendlini efana neyangempela.
Khumbula, izingcingo ezingaxhunyiwe kuhlelo lwakho lokushaya ibanga elide zizoxhunywa ku-Skype nge-inthanethi. Izinhlelo zokuncintisana zebanga elide empeleni, uma uthola i-Skype Premium, engabiza imali engafinyelela kumadola amane namasenti angamashumi amane nesishiyagalolunye ngenyanga, ungasebenzisa i-Skype ukwenza izingcingo ezingenamkhawulo noma kuphi eCanada noma e-US futhi akudingeki usebenzise isikhathi sakho eside uhlelo lokushayela ibanga. Futhi, uthola isici sokuxoxa ngeqembu ngeSkype Premium esihle impela ekwenzeni izingcingo zebhizinisi njengoba ngangivame ukwenza noma nje ukuhlanganisa umndeni wonke, umndeni wami uhlala yonke indawo, ngakho-ke kuyindlela enhle yokusithinta sonke.
Esikhundleni sokukhokha lezo zinhlelo zomakhalekhukhwini eziphambene nokushisa imizuzu yakho, ungasebenzisa i-Skype esikhundleni salokho. Khumbula, izingcingo zeSkype kwiselula yakho zimbozwe uhlelo lwakho lwedatha. Uma ungenalo uhlelo olungenamkhawulo, kungcono ukusebenzisa i-Skype nge-hotspot yomphakathi, futhi lapho uhambela phesheya udinga i-WiFi ukugwema konke ukuzulazula okucasulayo -Avoid izimali, futhi manje amaphilisi anamakhamera awo abheke phambili athola konke amabhulukwe amahle ongawasebenzisela iSkype, okuyinto enhle kulezo zingxoxo ezibaluleke ngempela.
Ngabe la majini enza kanjani ukuthi isibumbu sami sibukeke manje uma ngikwazi nje? Yenzani i-demo kini bafana futhi ngizobuka yebo uh cha angikatholi muntu okwamanje kepha uma ungenza nje isifinyezo kithi Imean kulungile kimi ake ngithole iskripthi oh kulungile bhalisela ukusetshenziswa kohlelo lokusebenza lwe-Skype Smartphone izici ze-premium ezinjengezindatshana zamaqembu i-Skype emhlabeni wonke nezingcingo kanye nekhamera ye-ion ngizokubulala oh asingalokothi sikwenze lokhu, bangane, ungavumeli abangane bakho balwe nobuchwepheshe, ngakho-ke uma uwuthanda umbukiso wethu weviki unabangani ocabanga ukuthi bazokwenza okufanayo ngakho-ke ngandlela-thile yabelana nge-torille yomngane wakho ngamunye lapho ubhalisa. Uzocelwa ukuthi uwine umklomelo wanyanga zonke ukusiza ukukhipha igama futhi wazise bonke abangane bakho ukuthi impilo ephathekayo ingamane iphenduke
i-watermark ngaphezulu kwesithombe
Kungani kukhona ukubambezeleka emiyalezweni yami ye-Skype?
Ukubambezeleka phakathi kwemiyalezo yombhalo, ividiyo engahambisani nomsindo, ividiyo efriziwe noma ukuthula okufile kumsindo konke kungaba yizimpawu ze-Skype lag.
Kungani iSkype ingaveli efonini yami?
Qiniseka ukuthi ungene ngemvume ku-Skype futhi isebenza kudivayisi yakho. Uma ungangenanga ngemvume noma uhlelo lokusebenza lungasebenzi, ungahle ungatholi izaziso zemilayezo engenayo. Ungahle ube nenkinga ngokuxhumeka kwakho kwe-inthanethi.
Kwenzekani uma ungenayo i-akhawunti ye-Skype?
Qiniseka ukuthi ungene ngemvume ku-Skype futhi isebenza kudivayisi yakho. Uma ungangenanga ngemvume noma uhlelo lokusebenza lungasebenzi, ungahle ungatholi izaziso zemilayezo engenayo. Ungahle ube nenkinga ngokuxhumeka kwakho kwe-inthanethi. Uma ungenalo uxhumano lwe-inthanethi, uzothola isibhengezo ku-Skype sithi Alukho uxhumano lwe-inthanethi.
Kungani ividiyo yami isala lapho ngenza ucingo lwe-Skype?
I-Skype idlulisela amasiginali ngokuzenzakalela ngenye iseva uma i-firewall yakho ingalungiselelwe ukuvumela ukungena kwe-Skype ngqo. Lokhu kuvame ukudala i-lag yevidiyo. Ukubona ukuthi amasiginali akho adluliselwa ngesikhathi socingo lweSkype, chofoza imenyu ethi 'Shayela' bese ukhetha 'Ulwazi Lobuchwepheshe Bocingo.'.